မျိုးရိုးဗီဇနှင့်တိုင်းထွာ Evolution, အဖြစ်များသည့်ဆင်းသက်လာများအတွက်အထောက်အထားပေးကဘယ်လို
ဘုံနွယ်ဖွားများနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားသက်သေအထောက်အထားများအားဖွင့်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာဘုံနွယ်ဖွားဖြစ်နိုင်သောနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ဖွယ်ရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကအဖျားအဘယ်သူမျှမအချိန်ကာလထိုကဲ့သို့ရှည်လျားသောကာလ (ရသောအခါရှိကွောငျးတူညီတဲ့ပြဿနာကိုကျော်ပါကစောငျ့ရှောကျဖို့ရှိတယ်ကြောင့်ဘုံနွယ်ဖွားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းမပြပါဘူး တဲ့လူသတ်မှုတရားခွင်ထဲမှာမပါတိုက်ရိုက်မျက်မြင်သက်သေလည်းမရှိ ) ။ ကျနော်တို့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်လေ့လာရေးဆင့်ကဲအဘို့သက်သေသာဓကများကိုမည်ကဲ့သို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
p.folk / ဓာတ်ပုံ / Moment / Getty Images
ဤအဖြစ်ရပ်မှန်ပေးထားသောကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကောက်ချက်ချဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ သင်လက်စွပ်မျိုးစိတ်အားဖြင့်သရုပ်ပြမျိုးစိတ်လျော့ပြေ, သဘာဝရွေးချယ်ခြင်း, နှင့်အချိန်ကျော်အများအပြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအကြီးစားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မူကြောင်းကို ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်လာသည်။
အီဗိုလူးရှင်း၏အခြေခံနှင့်အဓိပ္ပါယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသက်ရှိများ၏လူဦးရေ၏မျိုးဗီဇရေကူးကန်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲမျိုးရိုးဗီဇ code တွေရဲ့အလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အများကြီးရှိသည်, ဒါပေမယ့်သိပ္ပံသက်ရှိအကျင့်ကိုကျင့်၏ပုံမျိုးဗီဇပစ္စည်းအကြောင်းကိုအသိပညာ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်ဆောကျခဲ့သညျ။ ဘယ်လို DNA ကိုအပြောင်းအလဲများကိုကျွန်တော်တို့သည် DNA ကိုယေဘုယျနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှအညီအမျှအရေးကြီးသောအတွက်ဘာတစ်ခုတော်တော်လေးကောင်းသောဥာဏ်ရှိသည်။ နောက်ထပ် "
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စောင့်ကြည့် - Evolution သတ်မှတ်ခဲ့ဘယ်လို
အီဗိုလူးရှင်း၏အခြေခံအကျဆုံးတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်လေ့လာရေးပါပဲ။ Creationists တကယ်တော့ကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်နှစ်ခုစလုံးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိဖူးကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ နောက်ထပ် "
'' Black နဲ့ White ကအတွေးအခေါ် '' ဆိုတာဘာလဲ?
Freethought - အကြောင်းပြချက်ကနေဆင်းသက်လာယုံကြည်ချက်
ရှေးဟောငျးအီဂဂရိနိုင်ငံအတွက်အနစ်နာခံ၏ Method ကို
အိမ်ထောင်ရေးပှားအတှကျ Is: လိင်တူအိမ်ထောင်ရေးဆန့်ကျင်ငြင်းခုံ
Allegheny v ၏ကောင်တီ။ ACLU သာ. ကွီးမွတျရှိကြောင်း Pittsburgh အခန်း (1989)
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict XVI က (ယောသပ်သည် Ratzinger) တစ်ဦးကနာဇီခဲ့သလား
ရေတပ်လေကြောင်း: သင်္ဘော USS Langley - ပထမဦးစွာအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော
သင်ဟာတစ်ဦးက 29er တောင်ဆိုင်ကယ်လိုအပ်ပါသလား
သုံးသပ်ချက်များ - သူမကငါ့ကိုခစျြဘေးအန္တရာယ်များနှင့်တောက်ပစတား
ထိပ်တန်း5အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးနိုင်ငံအဆိုတော်များ
သစ်ပင်ရေညှိ flux (Wetwood) ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း, Diagnosing
ရာသီခွင်မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ: Virgo က Man နှင့် Pisces အမျိုးသမီး
ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်ရဲ့ 1984 ခုနှစ်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ, တစ်ဦးအထူး Ed ကကျောင်းသားသတ်မှတ်ဖေါ်ပြသောစာရွက်စာတမ်း